Chọpụta uru nke agwa mmadụ ịga ije | Bezzia
Abamuru nke omume ije ije
Susana Garcia | 08/06/2021 20:00 | Mmega ahụ, Ahụike
El àgwà ije bụ otu ihe kachasị mkpa gbasara imega ahụ kwa ụbọchị ma dịịrị onye ọ bụla. Ọ dị ka obere mmega ahụ mana mana ọ na-ewetara anyị nnukwu elele nke anyị nwere ike ịchọpụtaghị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhazi ọdịdị n’emeghị omume siri ike ma ọ bụ ọzụzụ, ị nwere ike isonye n’egwuregwu kachasị mkpa, omume ije ije.
Ije ije bụ ihe fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwee ike ịme kwa ụbọchị, yabụ ọ bụ egwuregwu na-enweghị ihe ngọpụ. Ọ nwere ọtụtụ uru na-eme ka anyị họrọ ya dị ka otu n'ime egwuregwu kachasị mma maka mmadụ niile. Na mgbakwunye, enwere ike ịme ya ọbụlagodi na anyị enweghị nnukwu egwuregwu, yabụ ọ nwere ike ịbụ egwuregwu dị mma iji malite.
1 Uru nke ije
2 Na-enyere aka ịnọgide na-ebu ibu
3 Ọ na-ebelata nrụgide
4 Na-echebe nkwonkwo
5 Esi mee ka agwa ọhụrụ
Uru nke ije
Ije ije bụ agwa dị mfe nke fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwee ike ime. Otu n'ime uru ya kacha mma bụ na ọ dịghị ihe pụrụ iche dị mkpa iji mee ya. Anyị ga-ahọrọ naanị uwe dị mma na akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ekwesị. Akpụkpọ ụkwụ dị na nke a bụ nke kachasị mkpa, n'ihi na ọ ga-adị mma ma nwee ụfọdụ ihe mkpuchi, ọ bụ ezie na ọ ekwesịghị ịkọwapụta dị ka nke akpụkpọ ụkwụ na-agba ọsọ ma ọ bụ maka egwuregwu ndị ọzọ ebe ọ bụ na mmetụta ahụ pere mpe. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ime ya kwa ụbọchị ma dịkwa mfe, n’anaghị anyị ego. Ọ bụ otu n'ime egwuregwu kachasị mkpa enwere ike ịme yana ọ bụ ya mere na oge ụfọdụ anyị anaghị achọpụta ya, mana obi abụọ adịghị ya na ọ bụ egwuregwu iji tụlee.
Na-enyere aka ịnọgide na-ebu ibu
Ọ dị mkpa ịnọgide na-enwe ezi ahụ ike n’ihi na ịdị n’ibu anyị nwere ọtụtụ uru ahụike. Inwe oke ibu adịghị mma, mana ibubigakwa ibu ókè, ebe ọ bụ na ọ na-abịa nsogbu ndị dị ka mgbagharị na-adịghị mma, cholesterol ma ọ bụ nsogbu obi. Ije ije bụ egwuregwu bụ isi mana ọ bụrụ na anyị eme ya kwa ụbọchị, site na ezigbo ije, anyị nwere ike jigide ibu anyị n'ụzọ dị mfe. N'ụbọchị ị na-achọghị ịme egwuregwu kpụ ọkụ n'ọnụ, jee ije, n'ihi na ọ bụ ụzọ ọzọ ị ga-esi rụọ ọrụ dị mfe.
Ọ na-ebelata nrụgide
Na ndụ kwa ụbọchị anyị nwere ọtụtụ nrụkọ gbakọtara nke na-abaghị uru, ebe ọ bụ na ọnọdụ a dị na ahụ anyị kwesịrị ịrụ ọrụ naanị n'oge kwesịrị ekwesị ma ugbu a anyị bi na nrụgide na-adịgide adịgide, nke nwere nsonaazụ na ahụ anyị na usoro mgbochi anyị. Ọ bụ ya mere iwelata nrụgide ji dị mkpa. Ije ije kwa ụbọchị na-enyere anyị aka belata nrụgide nrụgide n'ihi na mmega ahụ na-eweta endorphin ma na-eme ka ahụ ruo anyị ala. Nke a na - eme ka sistemu anyị ji sie ike karịa ka cortisol na - emetụta ya, homonụ nke anyị na - ezochi na nrụgide.
Àgwà nke ije na-enyere aka ichebe nkwonkwodị ka ọ na-ewusi ikpere na hips ike. Mmega ahụ na-emekwa ka uru ahụ na ọkpụkpụ sie ike, ọ bụ ya mere o ji baa uru maka ahụ anyị. Mmega ahụ dị oke mkpa dị mkpa maka ahụ anyị ka ọ ghara ịdị ngwa ma sie ike n’ime afọ niile. Izere nkwonkwo, akwara na ọkpụkpụ nsogbu nwere ike nweta site na imega ahụ.
Esi mee ka agwa ọhụrụ
Na-eje ije kwa ụbọchị nwere ike ịbụ ezigbo ụzọ iji nọrọ na ezi ahụike. Omume ohuru a kwesiri ime opekata mpe ọkara elekere kwa ubochi iji hu uru ya. Ga-ejiriri ezigbo ije iji nweta elele kacha mma, ebe ije ije n’ụzọ dị mma na-eme ka obi gị na mbọ ị na-agba na-eme ka ọ dịkwuo elu. Kwesịrị ịnweta ezigbo akpụkpọ ụkwụ ma chọọ ebe ndị na-adọrọ mmasị ịga ije, na-agbanwe ụzọ dị iche iche. Anyị nwere ike ịgụnye ụfọdụ site na mkpọda iji nweta mmetuta ọzọ na mmega ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Abamuru nke omume ije ije
Otu nsogbu ike si emetụta di na nwunye
Uru nke ọzụzụ nkwusioru